မကြာခင်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုခံစားရတော့မယ့် ခီမောင်နှံရဲ့ တတိယမြောက် အမိုက်စားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး - Thadin
HomeCELEBRITYမကြာခင်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုခံစားရတော့မယ့် ခီမောင်နှံရဲ့ တတိယမြောက် အမိုက်စားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
August 31, 2018 Admin Kwee CELEBRITY 1
စစ်မှန်တဲ့အနုပညာတွေနဲ့ ရင်ထဲကဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အမိုက်စားဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကို ဖန်တီးလေ့ရှိသူနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ အမြဲလိုလို အသစ်အသစ်သောဖန်တီးမှုတွေနဲ့အတူ ကြိုးစားနေကြတာပါ။
ဒီနေ့လေးမှာလည်း သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ တတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “Now & Ever” ဇာတ်ကားကြီးရဲ့အကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲက စကားလုံးတွေကလည်း ထိမိလွန်းတာမို့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်း အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ခရစ္စတီးနားခီတို့ရဲ့ တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခရစ္စတီးနားခီကတော့ ” ချစ်သူရဲ့ ရင်ထဲကိုမြင်ခွင့်ရတဲ့ “Now & Ever”!!! Our Third film!! သူကအချစ်ကို မြင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ…. ကိုယ်က အချစ်ကို ပုံဖော်ပေးဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေရုံလေးပါပဲ…” ဆိုပြီး သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့နဲ့အတူ တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြထားတာပါ။
အမြဲလိုလို အကြင်နာအရိပ်တွေပြည့်နှက်နေတတ်တဲ့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး
ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ “ဥပါယ်တံမျဉ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ လက်ခံအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး ဒုတိယမြောက်ရုံတင်တဲ့ “မုဒြာခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားလို့ ပရိသတ်တွေက မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ ချစ်ပရိသတ်တွေရော ဇဏ်ခီတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ တတိယမြောက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရုံတင်ပြသရင် အားပေးကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
စဈမှနျတဲ့အနုပညာတှနေဲ့ ရငျထဲကဖွဈလာတဲ့ခံစားခကျြတှကေို ပေါငျးစပျထားတဲ့ အမိုကျစားဇာတျကားကောငျးလေးတှကေို ဖနျတီးလရှေိ့သူနှဈဦးဖွဈတဲ့ ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးကတော့ အမွဲလိုလို အသဈအသဈသောဖနျတီးမှုတှနေဲ့အတူ ကွိုးစားနကွေတာပါ။
ဒီနလေ့ေးမှာလညျး သူတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးရဲ့ တတိယမွောကျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးဖွဈတဲ့ “Now & Ever” ဇာတျကားကွီးရဲ့အကွောငျးကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ဝမြှေပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဇာတျဝငျခနျးထဲက စကားလုံးတှကေလညျး ထိမိလှနျးတာမို့ ပရိသတျတှအေားလုံးကလညျး အရမျးကို စိတျဝငျစားနကွေတာပါ။ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ ခရစ်စတီးနားခီတို့ရဲ့ တတိယမွောကျရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရဲ့အကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ခရစ်စတီးနားခီကတော့ ” ခဈြသူရဲ့ ရငျထဲကိုမွငျခှငျ့ရတဲ့ “Now & Ever”!!! Our Third film!! သူကအခဈြကို မွငျခှငျ့ပေးလိုကျတဲ့အခါ…. ကိုယျက အခဈြကို ပုံဖျောပေးဖို့ အဆငျ့သငျ့ဖွဈနရေုံလေးပါပဲ…” ဆိုပွီး သူတို့နှဈဦးရဲ့ ပုံရိပျတဈခြို့နဲ့အတူ တတိယမွောကျရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရဲ့အကွောငျးကို ပွောပွထားတာပါ။
အမွဲလိုလို အကွငျနာအရိပျတှပွေညျ့နှကျနတေတျတဲ့ သူတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦး
ဇဏျခီနဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးကတော့ “ဥပါယျတံမဉျြ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့ ပရိသတျတှေ လကျခံအားပေးခဲ့ကွတာဖွဈပွီး ဒုတိယမွောကျရုံတငျတဲ့ “မုဒွာချေါသံ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကလညျး အနှဈသာရပွညျ့ဝတဲ့ ဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားလို့ ပရိသတျတှကေ မှတျခကျြပေးခဲ့ကွတာပါ။ ခဈြပရိသတျတှရေော ဇဏျခီတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးရဲ့ တတိယမွောကျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးရုံတငျပွသရငျ အားပေးကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
Cialis Professional Tadalafil Indications Amoxil generic 5mg cialis best price Rhineinc.In Sildenafil Buy
This Month : 41355
This Year : 236753
Total Users : 595777
Total views : 2737004